Persimmon | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Persimmon: toetra mahasoa sy fanoherana
Ny voankazo dia manome be dia be amin'ny vokatra tsara. Amin'izao fotoana izao, izao no fotoana tena tsara ho an'ny vitamina - persimmon, izay manampy amin'ny fanamafisana ny rafitra fiarovana amin'ny andro ririnina. Ao amin'ny fikambanana botanika, ny voankazo dia berry, saingy amin'ny fihinanana dia antsoina hoe voankazo. Andao hiezaka hamantatra ny singa sarobidy ao anaty voankazo, inona no soa sy ny vokatra ateraky ny fampiasana azy.
Persimmon ao amin'ny Crimée: fambolena sy fiahiana
Raha tianao ny mihinana vokatra mahasalama, dia tsy maintsy eo ambony latabatra ny persimmon isaky ny vanim-potoana. Ny berry dia hikarakara ny masonao, ny fo, ny havokavoka, ny tsinay, ny voa, ny hemoglobinina ao amin'ny ra, ny hatsaran-tarehy tsara tarehy sy ny hatsaran-tarehy. Aza mieritreritra fa ny sakafo toy izany dia ho lany taminao.
Karazana fampiasana sy tombontsoa ho an'ny vatan'ny vehivavy iray
Ny voka-dratsin'ny faniriana eo amin'ny vatan'ny vehivavy dia tena goavana: ny voankazo dia ampiasaina ho an'ny sakafo, ampiasaina amin'ny tanjona medikaly, ampiasaina amin'ny cosmetology ary ho an'ny fatiantoka. Hevero ny toetra mampiavaka ity vokatra tsy dia mazava ity, ny singany, indrindra ny fampiasana sy fampiharana. Ny famaritana sy ny toetran'ny Persimmon dia antsoina hoe voankazo mamy avy amin'ny sotrokely.
Mampitombo ny faniriana ao an-trano avy amin'ny vato izahay: ny fitsipiky ny fambolena sy fiahiana
Persimmon - fihinana mamy sy salama amin'ny fararano. Mba hampamirapiratra ny tenanao miaraka amin'ny voankazo mamy, tsy ilaina ny mividy azy ao amin'ny fivarotana. Ahoana no ahafahana mitombo ao an-trano, ho hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Manana karazana milanja an'arivony an'io zavamaniry Ebony io no fantatra. Ireo dia hazo amam-bika na hazo matevina sy karazan-tsakafo miaraka amin'ny voankazo voajanahary.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Persimmon